IGhana yakha indawo enamandla amakhulu kunazo zonke elanga e-Afrika - i-Afrikhepri Fondation
IGhana yakha isizinda esikhulu samandla elanga e-Afrika
Lyena iGhana ivulwe ngo-Okthoba 2015, isizinda esikhulu samandla elanga e-Afrika. Ngamandla okukhiqiza we-155 MW, izwe lizoqeda ngaleyo ndlela inkinga enameva yokuncika kwamandla okuvela kuwo amazwe amaningi ase-Afrika.
Iphrojekthi ngokusobala inesifiso esikhulu kunazo zonke e-Afrika emkhakheni wamandla elanga. Kuzosetshenziswa amahektha ayi-183 edolobhana lase-Aiwiaso (entshonalanga yeGhana) ukufakwa kwesiteshi sikagesi. Ukwenziwa kwephrojekthi yeNzema, okulinganiselwa ezigidini ezingama-400 zamaRandi (cishe ama-euro ayizigidi ezingama-306), kuphathiswe iBritish "Blue Energy". "INzema izosebenza ngokugcwele ngo-2015 futhi izoba namandla ka-155 MW, okuzokwenza ukuthi ibe ngesinye sezikhulu kunazo zonke emhlabeni ngoba zintathu kuphela izitshalo ezinamandla amakhulu kunalezi", kusho iqembu laseNgilandi.
Sekukonke, kuzofakwa ngaphezulu kwamaphaneli we-photovoltaic angaphezu kuka-630000 esizeni sephrojekthi. UNzema unezinye izinzuzo ngokwezomnotho. Ngokusho kweziphathimandla zaseGhana, lesi sitshalo sizoba yisikhuthazo sokuqashwa eGhana. Iphrojekthi izokwakha imisebenzi engama-500 ngokuphelele. Ngokusho kwabezindaba, imisebenzi engu-2100 emnothweni wendawo izokhuthazwa (ukwenza isivumelwano esincane semisebenzi).
Njengesikhumbuzo, iGhana incike kuphela eziteshini zamandla kagesi wokubacindezela, ukuyiveza kuma-vagaries wesimo sezulu (ukwehla komkhiqizo uma kunesomiso).
Izimfundiso zeThempeli - Vol 1 (PDF)
Ngokulingana kwezinhlanga zabantu - u-Anténor Firmin
Amandla Okucabanga Okuvumayo - UNorman Vincent Peale (Umsindo)
Maduze nje kuzokwakhiwa i-TGV ezoxhumanisa iMorocco, Algeria neTunisia